Sida loo rakibo fidinta Google Chrome ee Android | Androidsis
DaniPlay | 01/08/2021 00:18 | La cusbooneysiiyay 03/08/2021 00:37 | Tababarada
Mid ka mid ah waxyaabihii ka dhigay Google Chrome mid la isku hallayn karo waa kordhinteeda. Isticmaal kasta wuxuu maanta ku dari karaa shaqooyin kala duwan biraawsarka shabakadda caanka ah, oo si ballaaran loogu rakibay PC -ga iyo aaladaha mobilada labadaba. Chromium -ka way fududahay in la helo bakhaar si loo soo dejiyo fidinta, laakiin tani caadi ahaan maahan Android.
In kasta oo aan awoodin in lagu rakibo fidinta Google Chrome ee loogu talagalay AndroidHaa, waxaa lagu samayn karaa biraawsar ku saleysan Chromium, gaar ahaan Kiwi. Kiwi waxaa soo saaray isticmaale horumariyaha XDA, Arnaud42, oo u oggolaanaya rakibidda fidinta si fudud oo ka sarraysa dhammaan hab fudud.
1 Waa maxay kordhinta Google Chrome ee Android?
2 Laga soo bilaabo Yandex Browser
2.1 Sida loo rakibo kordhinta Yandex Browser
3 Iyada oo leh Kiwi Browser (Chromium)
3.1 Sida loo rakibo fidinta Kiwi
4 Sida loo dhaqaajiyo xannibaadda soo-boodka ee Google Chrome
4.1 Jooji xayaysiiska Google Chrome
Waa maxay kordhinta Google Chrome ee Android?
Hadda qof walba ma isticmaalo fidinta Google Chrome, laakiin ogaanshaha inay aad waxtar u leeyihiin waxaas oo dhan ayaa is -beddeli doona waxayna bilaabi doontaa in si aad ah loo isticmaalo. Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo yaqaan waxa loogu talagalay iyo sida loo isticmaalo, laakiin taa lidkeeda waxaa jira mid kale oo aan waligood isku dayin.
Kordhinta waa codsiyo yaryar oo lagu rakibay Google Chrome, oo aad ugu eg plugins -ka lagu rakibay aaladaha kale. Kala duwanaanshaha weyn ee iyaga ayaa ka dhigaya biraawsarka mid isku mid ah, ama si loo badbaadiyo, loo ciyaaro, loo horumariyo wax -soo -saarka, oo ka mid ah hawlo kale oo badan.
Badi fidinta Google Chrome ee Android Waa bilaash, in kasta oo soo -saareyaasha qaar ay ugu wacan tahay shaqada weyn ee ka dambaysa waxay rabeen inay dul dhigaan qiimo yar. Google waxay u abuurtay bakhaar si loo soo dejiyo fidinta waxayna ku dhex jirtaa Dukaanka Shabakadda Google Chrome.
Laga soo bilaabo Yandex Browser
Yandex Search waa shirkad caan ah oo fadhigeedu yahay Ruushka, oo adeegiisu noqdo. Shirkaddu, marka laga reebo in ay tahay matoor raadin xooggan oo dalka ka jira, waxay sidoo kale waqti badan ku bixisaa samaynta codsiyada. Yandex Browser waa mid ka mid ah horumarinteeda badan, daalacashada shabakadda ee ku saleysan Chromium.
Yandex Browser, oo ku saleysan Chromium, wuxuu ku tiirsan yahay saldhigga Google Chrome, oo kuu oggolaanaya inaad u adeegsato shaqooyin badan faa'iidooyinkaaga. Tilmaamaha Yandex Browser waa inuu awood u yeesho inuu adeegsado fidinta Google Chrome ee Android, dhibic kala duwan oo u dhexeeya codsigan iyo Chrome.
Browserka Yandex wuxuu marka hore adeegsadaa saddex fidin oo aasaasi ah, LastPass (maamulaha furaha), Jeebka (Qabashada maqaallada, fiidyowyada iyo in ka badan) iyo Evernote (Ka keydso waxyaabaha shabakadda si fudud). Laga soo bilaabo isla barowsarka waxaad marin u heli kartaa dhammaan fidinta, sida haddii ay tahay dukaan.
Sida loo rakibo kordhinta Yandex Browser
Ku rakibidda fidinta Yandex Browser runtii waa sahlan tahay, oo la mid ah waxa sida caadiga ah lagu sameeyo kombiyuutarka daaqadaha. Si aad u soo dejiso dheereyn, waa inaad gasho Dukaanka Webka Chrome, dukaanka rasmiga ah ee Google halkaas oo uu ku kaydiyo dhammaantood.
Si aad u rakibto mid ka mid ah samee waxyaabaha soo socda, laakiin xusuusnow inaad hore u rakibtay arjiga:
Ka gal bakhaarka Shabakadda Chrome biraawsarka Yandex qalabkaaga Android
Ka raadi dheereyn dukaanka, guji "Soo dejiso" iyo guji badhanka «Ku dar Chrome». Markaad samayso, aqbal ilaa dhammaadka oo ugu dambayn guji "Ku dar kordhin"
Browserku wuxuu bilaabi doonaa inuu rakibo fidinta, sug waqti caqli leh ilaa uu diyaar ka yahay, Yandex Browser ayaa ku soo ogeysiin doona markay shaqeyso
Qoraal ahaan, xaaladaha qaarkood waa inaad gacanta ku kicisaa fidinta
Iyada oo leh Kiwi Browser (Chromium)
Beddel kale oo loo adeegsado Yandex Browser waa Kiwi, Browser ku saleysan Chromium caan ah oo rakibi kara inta badan laakiin aan ahayn dhammaan fidinta. Waxay adeegsan doontaa dukaanka lahaanshaha Google, waa isla kan Yandex biraawsarka gala oo waxay noqon doontaa lagama maarmaan in gacanta lagu rakibo.
Codsiga waxaa laga heli karaa Dukaanka Play, waa mid ka mid ah dhowr ikhtiyaar isticmaal fidinta adigoon awoodin inaad ku rakibto wadan ahaan Google Chrome. Kiwi waa biraawsar caan ku ah culeyskiisa, isagoo adeegsanaya hab mugdi ah iyo inuu leeyahay turjumaan ku dhex jira oo caadi ah.
Marka laga reebo rakibidda fidinta, Kiwi wuxuu ku ciyaaraa fiidiyowyada YouTube -ka gadaal, galaangalka sheekaysiga Messenger -ka Facebook adigoon ku rakibin app ahaan iyo wax kaloo badan. Waa biraawsar bilaa lacag ah sababtuna waa kala duwanaanshaheeda waxay caan ku noqotay tan iyo dhalashadiisii.
Sida loo rakibo fidinta Kiwi
Waxa ugu horreeya ayaa ah inaad ka rakibto Kiwi Browser -ka Dukaanka Play -ka, soo dejintu waxay qaadataa xoogaa megabytes ah waxaadna ogaan doontaa marka aad furto inay si dhib yar u baabbi'in doonto xusuusta. Taageerada fidinta waxay ku koobnaan doontaa kuwa aan isticmaalin koodhka x86 binary, haddii aad taas isticmaasho, kordhinta ma awoodi doonto in la isticmaalo.
Kiwi Browser - Degdeg & Deggen
Developer: Joometriiga OU
Si aad ugu rakibto fiditaannadaas xiisaha leh Kiwi Browser, ku samee waxyaabaha soo socda biraawsarka mar hore lagu rakibay aaladdaada Android:
Fur Kiwi Browser -ka telefoonkaaga ama kiniinigaaga
Hadda guji saddexda dhibic ee ku yaal midigta sare si aad u furto dejimaha biraawsarka
PHadda guji erayga "Google" ama khadadka dhahaya "Fur Kiwi Web Store", tani waxay fursad siin doontaa Dukaanka Shabakadda Chrome
Raadi oo raadso fidintaas si aad u rakibto, waxaad raadin kartaa intaad rabto
Guji oo guji "Ku dar Chrome", soo dejintu isla markiiba way bilaaban doontaa oo si otomaatig ah ayaa loo rakibi doonaa
Marka la rakibo biraawsarka ayaa kuu sheegi doona inaad bilaabi karto isticmaalkiisa, iyo waliba mid walba waxa uu sameeyo
Waad ku dhaqaajin kartaa hadda adoo siinaya saddexda dhibcood oo raadinaya qaybta "Fidinta", markaad siiso waxaad bilaabi doontaa inaad ku isticmaasho shaqooyinkaas mid walba leeyahay
Si aad u tirtirto kordhinta waxaad u baahan doontaa inaad gasho biraawsarka, geli chrome: // extensions si loo helo kuwa la rakibay ilaa waqtigaas. Markay gudaha gasho, waxay tusi doontaa ikhtiyaarka ah "Delete" oo magaciisa ka hooseeya, iyo sidoo kale inay awood u leedahay inay kiciso ama joojiso. Browser -ka Kiwi wuxuu rakibi karaa fiditaanno badan inta uu rabo, laakiin xusuusnow inaad isticmaasho kuwa aad caadiyan isticmaasho si aadan u badin.
Sida loo dhaqaajiyo xannibaadda soo-boodka ee Google Chrome
Browserka Google Chrome sida caadiga ah wuxuu keenaa xannibaad xayeysiis, oo ku habboon goobahaas oo u muuqda inay muujiyaan daaqado badan oo soo-baxaya. Haddii aad caadi ahaan booqato goob xayeysiis badan leh, waxaa ugu wanaagsan in la dhaqaajiyo "Adblock"-ka caanka ah ee ku yimaada codsi ahaan.
Tan waxaa loo tixgelin karaa inay tahay kordhinta Google Chrome, laakiin waxay ku imaaneysaa mid isku dhafan, oo aan u baahnayn soo dejin iyo firfircoonaan si loo bilaabo shaqada. Si aad u dhaqaajiso dhowr tallaabo, ku samee waxyaabaha soo socda biraawsarka Google Chrome mid kasta oo ka mid ah aaladahaaga Android:
Guji "Settings" ee Google Chrome, guji saddexda dhibcood kaas oo ku yaal dhinaca midigta sare
Hel ikhtiyaarka "Dejinta Goobta"
Horeba qaabaynta «Daaqadaha soo-boodka ah iyo dib-u-jeedinta» ayaa gala
Dhaqaajiso "Pop-ups and redirects" bedelka, ka saar haddii aad rabto inaad ku muujiso boodhadhkaas xiisaha leh bogagga aad booqato
Jooji xayaysiiska Google Chrome
Pop-ups si sax ah ayay u dhibsadaan, laakiin sidoo kale waa xayaysiis. Goobo badan ayaa u baahan si ay u awoodo inay xaraashto, markaa talada ugu fiican ayaa ah inaad samayso mar kasta oo aad u aragto inay habboon tahay, maadaama laga yaabo inay dan u tahay kiisas kale.
Google Chrome wuxuu u xiraa xayeysiiyaha xayeysiiska sida caadiga ah, marka laga reebo xiritaanka daaqadaha, barowsarka caanka ah ee Google wuxuu leeyahay nooca fidinta gudaha ah. Si aad u sii waddo joojinta xayeysiiska, samee talaabada soo socota talaabo:
Gelitaanka «Dejinta» adiga oo gujinaya saddexda dhibcood ee qaybta sare ee midig ee arjiga
Soo hel ikhtiyaarka «Goobta Goobta», guji
Hadda guji «Xayeysiisyada iyo dib -u -hagaajinta» mar labaad si aad u awooddo inaad hagaajiso xuduudaha
Dhaqaajiso ikhtiyaarka oranaya "Xayeysiisyada" ama barkinta si bogagga oo dhami had iyo jeer u muujiyaan xayeysiisyo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo rakibo fidinta Google Chrome ee Android